यी मान्छेलाई ह्वेल माछाले निल्यो अनि फेरी ३० सेकेण्डपछि थुकिदियो ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/यी मान्छेलाई ह्वेल माछाले निल्यो अनि फेरी ३० सेकेण्डपछि थुकिदियो !
ह्वेलले आफूलाई निल्छ भन्नेमा उनी ढुक्क थिए । तर सौभाग्य, ह्वेलमाछा पानीको सतहमा आयो, टाउको हल्लायो र उनलाई बाहिर थुकिदियो । उनलाई तत्कालै नजिकै रहेका उनका सहकर्मीहरुले उद्दार गरे ।